राजेन्द्र खड्कीको खुलासा, ‘अब धेरै बाँच्दिन भन्ने थाहा पाएर श्रीकृष्णले श्वेतालाई ‘२ करोड दिन्छु अर्कै सङ बिहे गर भनेका थिए’ (भिडियो हेर्नुस्) - " सुलभ खबर "
राजेन्द्र खड्कीको खुलासा, ‘अब धेरै बाँच्दिन भन्ने थाहा पाएर श्रीकृष्णले श्वेतालाई ‘२ करोड दिन्छु अर्कै सङ बिहे गर भनेका थिए’ (भिडियो हेर्नुस्)
द्धन्द्ध निर्देशक राजेन्द्र खड्की स्पष्ट वक्ता हुन् । उनी निडर तरिकाले आफ्ना कुरा खुलस्त राख्छन् । उनले धेरै कलाकारका पोल पनि खोलिदिन्छन् । केही समय अघि उनले महानायक राजेश हमालको पनि पोल खोलिदिएका थिए ।
राजेश हमालको एक जना विदेशी गर्लफ्रेण्डलाई हमालले कमाल समतेर घुमाएको घटना उनले सार्वजनिक गरिदिएका थिए । अहिले चर्चामा रहेकी श्वेता खड्काको पनि उनले केही नयाँ कुरा खुलाएका छन् ।
उनी निकै पुराना द्धन्द्ध निर्देशक हुन् । उनीसंग काम नगरेका कलाकार सायदै होलान् । उनले श्वेतालाई पनि फिल्ममा खेलाएका छन् । त्यसैले उनलाई पनि राम्रोसंग जान्दछन् । साथै नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ उनका पृय साथी थिए ।
उनले श्रीकृष्णको फिल्ममा श्वेतालाई एक्सन रोल सिकाएको कुरा स्मरण गर्दै उनले दुई जनाबीचको सम्बन्धका बारेमा बोलेका छन् । उनले श्वेतालाई श्रीकृष्णले श्राप दिएको टिप्पणी गरे ।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएपछि आफुले श्वेतालाई विवाह नगर भनेर सल्लाह दिएको बताएका छन् । तर श्वेताले विवाह गरेकोमा उनलाई चित्त बुझेको छैन । उनले श्वेता देखावटीमा गएको र विवाह निकै भब्य तरिकाले गरेका सबैको आँखामा परेको बताए ।
श्रीकृष्णले आफुलाई आफ्नो निधनको शंकेत त्यतीबेलै गरेको र श्वेतालाई म २ करोड दिन्छु श्वेतालाई अरुसंग विवाह गर्न भनेर सम्झाइदिउ भनेर भनेको स्मरण गरेका छन् ।
त्यतीबेला नै श्रीकष्णले आफुलाई भनेको कुरा श्वेतालाई भन्दा श्वेता नबोलेको पनि बताएका छन् । उनले श्वेताले दोस्रो विवाह गर्दा आफु सहभागी हुन नगएको पनि बताए । उनले श्रीकृष्णको नामवाट श्वेता परिचित भएकाले उनकै नामवाट सुरु गरेको माझी वस्ती निर्माणको काम पुरा गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
एक वर्षीय बालकलाई ब्लड क्यान्सर, अभिभावकद्वारा सहयोगको अपील
छोरोले आमालाई प्रेमीको साथ यस्तो अवस्थामा देखेपछि!
अर्काको श्रीमानसँग रात बिताएपछि महिलालाई नि’बस्त्र सडकमा डुलाइयो !
अनिता र भगवान जस्ता श्रिमानको एकदमै मार्मिक पहिलो गित सार्वजनिक ,भिडियो भयो भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)